Onye okachamara nke Badminton Player
ndewo, Aha m bu Edwin Ekiring.A bu onye okachamara nke badminton player na Uganda, Ma na ebi na Netherlands. Na obodo a bu Netherland ka m zukoru ìgwè mmadụ, ndi nwere ezi uche basara arụ ihe ma kwa, na aru ezi ọrụ banyere arụ ike nke ga eweta ezi mgbanwe na nwa. di ka onye egwuregwu nkwoke enwere na ọtụtụ ahụmahụ banyere arụ ike kwa ụbọchị, ma kwa mkpa udi eji achọta/ ma bụ wetta ezigbo arụ ike mgbe ọ bụla arụ ike adịghị. karịchaa nime 2009, Mgbe/oge nwere mberede nke okporo ụzọ oge nu na ala n'ụlọ na ọzụzụ nke egwuregwu isi. nke a mere mu enwe were nkwarụ na ogwe-aka, na agịrịga, na nkwonkwo/isi ụkwụ na kwa na ikpere nke mere ka dọkita kwuru mu emela ihe ozuzu egwuregwu ọzọ.Ekele diri ndi nlekota arụ ike, ndi mere ka mu laghachi ọzọ na ihe egwuregwu na badminton nime ọnwa asatọ.
Na obodo bu uganda, ọ bụ ihe siri ike enweta nlekota aru ike di nma. Ihe a enyere m obi ụtọ basara nelekọta arụ ike anyi, nke pụtara ihe. Ndi MEDx eme ka onye ọ bụla mara ihe basara arụ ike ya ma kwa ndi na enwechaghi ngwá ọrụ eji elekọta arụ ike ka ha tinye uche banyere arụ ike umu mmadụ n'enye ha ohere ka ha hụ ụzọ ma ikpọtụrụ ndi okachamara bụ ndi dọkita nke nọ gburugburu n'ime otu ìgwè.
Enwere m okwukwu na usọrọ ga-adi nma , ma ọ bụ site nwetara ego mkpuchi nke ebe nlekọta a ga-eme n'onwe ha, ma ọ bu site na ndi otu ezinulo gafee n'uwa.
soyere anyi na-ime ka nke a ga nke ọma!
Ndewo, aha m bụ Arouna kone, a bụ m ezigbo onye ọtịkpa egwuruegwu bọọlu si ivory coast,Ebim n'England na Europe agbara m n'ime igwe ndi na eto eto di oke-egwu nke na-arụ ọrụ magburu onwe ya nke nlekọta ahụ ike na ọrụ ngo nke a- ahaghi igba nwe okpuru ụwa a nke ọma na-oge na-adighi anyị. ị bụ ezigbo onye ọrụ ogbu boolu ,ahụ ike m bụ niile, apughim irụ-ọrụ na-enweghi ya na uguu ma ọ bụ mgbe ọ na-ekweghim ruo, m chọọ ezigbo ebe nlekọta ahụ ike magburu onwe ya na usọrọ na ntupọ idozi m. Enwele m ugburo atọ (3) ezigbo oke ihe mmeru ahu n'ikpere na akpara bọọlu m, na 2006,2008 na 2013. Ọ bụrụ na m enweghi nelekọta aru ike nke kwesịrị ekwesị na n'mmeru ahụ nke ikeazụ,nke a n'eme ka arụ ma ọrụ bụrụ ihe biara na njedebe. Ma ekele diri ndi oké nelekọta arụ ihe m,ndi nnapụtara na nsough n'mmeru ahụ ike nke nwere....nka a mere m eji laghachi azụ ọzọ na eụkwụ bọl na nwa iri na anọ mesịrị. Obodo bụ Ivory Coast bụ obod mara mma ebe ọ na adịghị mfe eweta nlekọta arụ ike nke echọrọ ma bụ nke kwesịrị gi eweta. n'ihi nke a bu ihe ihe ijuanya ma bụ na bụghị ihe ijuanya na nelkọta arụ ike abụrụla ihe eguzosi ike kọmpụta . MEDx bụ ndi n'ike mmụọ nsọ enyere ụlọ ọrụ niile nke mere ka ndi mmadụ ma kwa ndi n'enwechaghi akụrụgwa ọrụ siri ike ma ọzọ enye ohere ka weta n'elekọta arụ ike nke kwesịrị ekwesị n'oge ọbụla na kwa mgbe ha a chọrọ ya na n'hụ ndi dọkịta bụ ndi okachamara nọ gburugburu nwa n'otu ìgwè. Ejim aka na usọrọ ha a ga-arụ ọrụ, ma ọ bụ site n'nrọpụta na mkpụchi akụ nke nelekọta ahụ ike site n'aka ownwe ha, ma bụ site ndi ọtụ ezi ụlọ n'ebe niile gafee n'nwa
A chọrọ ikele gi maka ịga nke ọma n'ihe ọmụmụ nke webinar nke kacha mkpa maka ezigbo nchepụta uche ọma nlekọta nke MEDx bụ maa oke ịma atụ nke mmepụta ihe ọhụrụ na africa kwesịrị n'oge a. M chọrọ ikweta nke a, ma karia onye nụ na-etiti ha maka nnụkwụ okachamara ndi nlekọta ihe omume-nlekọta nke MEDx nke na ihe ọmụmụ nke webinar na-aga igbanwe ọdiba obodo nke ahụ ike ọmụma ekere oke n'etiti ndi okachamara kamakwa nye ihe m nụrụ n'onụ onye nchọpụta, ndokwa ebe nlekọta ahụ ike na-ọghọgbu nrụpụta nke na ụzọ ọhụrụ.
Ana m atụ inwe ndi okachamara ndi ọzọ ịdenye aha ha ị bụ otu akụkụ nke obodo ọhụrụ nke ị na-eke ụgbụa.obodo na na-eme ka enwetazụọ oke ihe ọmụma ịmuta aka ọrụ ma mee ka enweta ya n'ụzọ di mfe, ọ bụghị nanị na ndi okachamara kamakwa onye ọ bụla nke chọrọ ya.Chiọma kacha mma na otu ugboro ọzọ,chapeau, dobe ya
Onye isi/onye ndú na ụkwụbọl
Nedewo, Aha bụ Joseph Ndo.Onye isi/onye ndú na ụkwụbọl na ebe, ugbu a n'ebi Ireland.Mgbe niile ka a na-enwe arụmụka etiti ezi ihe na ihe ọjọọ, na ihụnanya na kwa ikpọasi,na ọchi na akwa, na obi ụtọ na anyị iwe, ma na otu ihe nke anyị kwetara bụ na ahụ ike anyị bụ otu ihe di mkpa nke anyị kwesịrị ekweta.
Owa a jụpụtara na n'tamana ahụhụ na kwa mgbu.Esi ebe cameroon, m na enye ekele nye ndi n'elkọta arụ ike bụ ndi MEDx maka ezigbọ echiche ọma nke ha enye ndi mmadụ.Eee, ezigbọ echiche ọma a nke ha nye ụmụ mmadụ dịka gị na m,Ezinụlọ na kwa ndi enyi anyị,...anyị. site emeka ka ihe eji elekọta arụ ike bụrụ ihe eji kọmpụta eme....nke a bụrụla ihe di mfe, bụrụ ihe ga eme ka ịrụ ọrụ gaa nke ọma na kwa ihe ga di ịre nke nnyemka elekọta arụ ike n'ebe ọbụla ị n'ime ya na kwa oge ọ bụla.
Ndi MEDx bụ ndi nelekọta arụ ike na enye ụzọ na kwa usọrọ eji kantakti/ịpọtụrụ ndi nelekota arụ ike bụ di okachamara na obodo ọbụla ịnọ n'ime ya,.....MEDx eHealthCenter kenyere anyị mee kwa ọ bụrụ ihe pụrụ iche na onwe ya. projekti/arụmarụ a enye obi ụtọ na obi ndi mmadụ. arụmarụ enye ndi mmadụ ahụhụ na ochicho enwere ịhụnaanya n'ebe onye agbata obi anyị
Ejim aka usọrọ ga-arụ ọrụ,ma ọ bụ site n'nrọpụta mkpụchi akụ nke elekọta arụ ike site n'aka onwe ha, ma ọ bụ site nti ọtụ ezi n'ụlọ n'ebe niile gafee n'nwa. M kweere na ọrụ anyị ga emezu site na enyemaka nke Anyị inyere ha.
isonyere anyị eme ka arụmarụ pụta ihi ma kwa ga nke ọma! (www.medx.care)